﻿ भरतपुरमा अब के हुन्छ ?
चितवन । निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका विषयमा शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ । मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भएकोमा शुक्रबार छलफल गरेर निर्णय गरिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । मतपत्र च्यातिएपछि रोकिएको मतगणा फेरि सुरु गर्नु पर्ने माग गर्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फेरि मतदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको एक मात्र स्थानीय तह भरतपुर महानगरपालिका हो । गएको १४ गते मध्यरात मतगणनाको क्रममा माओवादीका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि गणना कार्य स्थगित भएको थियो । नोक्सान पुगेका मतपत्रको संख्या यकिन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि बिहीबार प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा शिलबन्दी खोली विवरण पठाइसकेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका मतगणनाका क्रममा भएको घटनामा ९० मतपत्र नोक्सानी भएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगले नोक्सान भएको मतपत्र गन्न निर्देशन दिएपछि उम्मेदवारहरुको रोहवरमा बिहीबार नोक्सान भएको मतपत्र छुट्याइएको थियो । जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल, दलका उम्मेद्वारहरुको रोहवरमा शिलबन्दी खोलि छुट्याइएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा जम्मा २ हजार ८ सय ९७ मत खसेको थियो । च्यातिनु अघि एक हजार ८ सय ९ मत गणना भइसकेको थियो । त्यस वडामा खसेको मतमा गणना हुन बाँकी रहेको मतमा ९ सय ९८ मत सुरक्षित रहेको र ९० मत नोक्सानी पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले चितवनले पत्रकार सम्मेलन गरी मतपत्र च्यात्ने दोषी माथि कारबाही गरी रोकिएको मतगणना कार्य तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनले निर्वाचन आयोगमा मतगणना प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न पटकपटक आग्रह गर्दासमेत व्यवस्थित नगरिएको कारण घटना घटेको जनाएको छ । घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र च्यातिएको केन्द्रको मतदान पुनः गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० बम्मोजिम सम्बन्धित केन्द्रमा तत्काल पुनः मतदान हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
निर्वाचन ऐनमा भने यस्तो अवस्थामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
निर्वाचन ऐन दफा ४९ को (१) मा भनिएको छ, ‘मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा खोलिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुर्घटनावस नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’
४९ कै उपदफमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मतगणनाको काम स्थगित गरिएपछि आयोगले त्यस्तो मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतदान अवैध भएको घोषणा गर्नेछ र आयोगको निर्देशनमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मिति र समय यथाशिघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गर्ने छ ।’